सरकारविरुद्ध देशैभर कांग्रेसकाे विरोध प्रदर्शन, बाबुराम भट्टराईले दिए बधाई | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सरकारविरुद्ध देशैभर कांग्रेसकाे विरोध प्रदर्शन, बाबुराम भट्टराईले दिए बधाई
सरकारविरुद्ध देशैभर कांग्रेसकाे विरोध प्रदर्शन, बाबुराम भट्टराईले दिए बधाई
मंसिर २९ गते, २०७७ - १६:०९
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले काँग्रेसलाई बधाई दिएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारको निरंकुशता रकुशासनविरुद्ध सडकमा उत्रिएकोमा नेपाली काँग्रेसलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत डा।भट्टराईले बधाई दिएका हुन् ।
उनले आफ्नो पार्टी पनि छिट्टै एकता समायाजनको काम सकर सडक र सदनमा गर्जने भट्टराईले बताए ।
‘ओली सरकारको निरंकुशतारकुशासनविरूद्ध सडकमा उत्रेको कांग्रेसलाई बधाई ! भनिन्छ लोकतन्त्रमा राजनीतिका तीन प्रमुख कार्यक्षेत्रमध्ये सरकारमा सत्तापक्षको र सदन तथा सडकमा विपक्षको अधिकाररकर्तव्य हुन्छ,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘अब सदन बोलाउन पहल गरौं । जसपा पनि छिटै पार्टी एकता समायोजनको काम सकेर सडक/सदनमा गर्जन्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आज देशभर सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ । विरोध प्रदर्शनका लागि काँग्रेस कार्यकर्ताले देशैभर र्याली निकालेका छन् ।
मंसिर २९ गते, २०७७ - १६:०९ मा प्रकाशित